गर्भाधारणको समयमा योगा : कति फाईदा कति बेफाईदा ? – bampijhyala.com
Home > जीवन शैली > योग स्वास्थ्य > गर्भाधारणको समयमा योगा : कति फाईदा कति बेफाईदा ?
१८ मंसिर २०७७, बिहीबार ११:४७ bampijhyala
बाँपीझ्याला, बलिउड अभिनेत्री अनुष्का शर्माले केही महिना पहिला आफू गर्भवति भएको र जनवरीमा सन्तान जन्माउन लागको खबर सार्वजनिक गरेकी थिइन्। हिजो आज अनुष्का श्रीमानको मद्दत लिएर गर्भावस्थालाई स्वस्थ बनाउनको लागि योगा गरिरहेकी छन्। अनुष्काले विराटको सहयोगमा शिर्षासन गरेको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भईरहेको छ।
यसरी गर्भावस्थामा योगा गर्ने अभिनेत्री अनुष्का मात्र हैनन्। यो भन्दा अगाडि करिना कपूर खान, शिल्पा सेट्टीले पनि गर्भावस्थामा योगा गरेका छन्। ४ वर्षको अन्तरालमा दुई पल्ट आमा बन्न लागेकी करीना कपूर खान गर्भवति भएको खबर गर्नुभन्दा दुई दिन अगाडि वर्कआउट गरेको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा देखिएको थियो।
थनु लुँय भाउ थात ओन
शरीरमा अक्सिजनको कमी हुँदा किन घोप्टो परेर सत्नुपर्छ ? १८ मंसिर २०७७, बिहीबार ११:४७
माओवादी केन्द्र कस्तो बनाउने ? प्रचण्डले मागे सुझाव १८ मंसिर २०७७, बिहीबार ११:४७
बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक १८ मंसिर २०७७, बिहीबार ११:४७
अनाधिकृत रुपमा रकम संकलन नगर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखाको आग्रह १८ मंसिर २०७७, बिहीबार ११:४७
झीगु नेवाः भाय् या यें, यल व ख्वप भाषिका जक मखु कि दोलखा नेवाः भाय् , पहरिभाय्, प्यांगाभाय् थें नां जाःगु च्यागु झिगु कचा भाषिका दु । १८ मंसिर २०७७, बिहीबार ११:४७